Uhlelelwa umcimbi umfundi wase-UKZN - Ilanga News
Home Izindaba Uhlelelwa umcimbi umfundi wase-UKZN
Uhlelelwa umcimbi umfundi wase-UKZN
Udaba lwakhe luthinte abaningi ekhala ngenkathi ethweswa iziqu
UHLELELWA indumezulu yomcimbi wokubungaza iziqu zakhe ngosomabhizinisi baseMpangeni namaphethelo uMnu Dumisani Ngobese, osethole nomsebenzi ngemuva kokusabalala kodaba lwakhe ekade ethweswa izinqu e-UKZN.
OSOMABHIZINISI baseMpangeni namaphethelo sebehlele umcimbi wokubungaza insizwa eshiye abaningi bechiphiza ngemuva kokubona isithombe sayo ezinkundleni zokuxhumana ithweswa iziqu ze-Bachelor of Arts e-University of KwaZulu-Natal, ngoLwesihlanu. UMnu Dumisani Ngobese (23) waseBhukhanana, eMpangeni ubonakale ekhala ngesikhathi ehamba esiteji, washiya abaningi bechiphiza, nokuthe uma lesi sikhungo semfundo ephakeme sesiveza udaba lwakhe ukuthi ubekhalelani, abaningi basala bethintekile.
Le nsizwa iveze ukuthi ibuya ekhaya okweswelwe kulona kangangokuthi kayibanga nayo ngi-sho imali yesudi njengoba abaningi usuku lokuthwala iziqu, kuwusuku abadlisa ngalo ngemvunulo nangemfashini. Iveze ukuthi ikhuliswe nguninakhulu wayo, kanti kubo bayishumi futhi kuyikhathazile ukungaphumeleli kukaninakhulu wayo ngesikhathi yethweswa iziqu, ngenxa yempilo ebuthakathaka nokushoda kwemali. Kube sekuqhamuka abaningi abebethi bayafisa ukulekelela ukuzama ukushintsha impilo yale nsizwa. NgoMgqibelo uMnu Ngobese, ulale eseyisisebenzi saseCalvin and Family Group, okuyinkampani kaMnu Calvin noSmangele Mathibeli, abangosomabhizinisi.
Ngisho isikhungo i-UKZN sikhiphe isitatimende sibonga labo so-mabhizinisi ngemuva kokumeme-zela kwabo ukuthi sebemqashile ngokugcwele, futhi njengoba enza i-Honours bazomkhokhela. UMnu Mathibeli uthe kusukela namhlanje ngoMsombuluko uMnu Ngobese, uzobe esesehhovisi esebenza ngoba njengoba efunda nje, izifundo zakhe uzenza online. “Lungithintile kakhulu udaba lwakhe njengoba nami ngikhule ngendlela ethi mayicishe ifane neyakhe. Nangemuva kokukhuluma naye ngathinteka kakhulu,” kusho yena. Uthe ubone kungcono amvulele isikhundla enkampanini yakhe.
UMnu Njabulo Zuma, ongumnikazi wezindawo zokudla eRichards Bay naseNewcastle, iLa Fusion Chefs, uthi ubone ukuthi nabo kumele kube neqhaza abalibambayo ekubungazeni uMnu Ngobese ngemuva kokuthintwa wudaba lwakhe. “Ngoba uyinsizwa yaseMpangeni lapho nami ngizalwa khona, ngibone kukuhle ukuthi nathi njengenkampani kubekhona esimenzela khona. “Sibe sesiqhamuka nomqondo wokuthi simenzele umcimbi wokubungaza ukugqoka kwakhe ijazi (Graduation Party), esizowenzela endaweni yethu yokudla ngoMgqibelo. “Ujabule kakhulu ngesikhathi sikhuluma naye, simtshela ukuthi sizomenzela umcimbi onjengalona futhi sifisa ukuthi afike naye ugogo wakhe.
“Besingazi ukuthi kuzogcina kunabaningi kangaka abazofisa ukuphonsa esivivaneni njengoba sekukhona nozokwenza ikhekhe, onikele ngokumthungela isudi, kube nozonikela ngendawo yokulala ugogo nokunye okuningi,” kusho yena. Uthe njengamanje balinde kuqale isonto baxoxisane nomasipala ngoba kukhona asebefisa ukumhlangabeza kwenziwe ne-convoy abungazwe kahle uMnu Ngobese. “Ngesikhathi ngikhuluma naye uvele wakhala, ngaluvala ucingo ngoba ngenzela ukuthi aphole kahle. “Udaba lwakhe siyafisa ukuthi lugqugquzele nabanye abantu abasha abaphuma emakhaya angamile kahle ukuthi isimo sabo kumele bazi ukuthi singashintsha noma yinini njengoba kushintshe esakhe uMnu Ngobese,” esho.
Uthi bahlelele ukuthi kube nezibiliboco, angene nabantu aba-ngu-50 kule ndawo. “Kungaba ngabantu abefunda nabo, abangane bakhe nezihlobo kodwa sizothatha abantu aba-ngu-50 kuphela ngaphandle uma izinhlelo zethu zibuye zishintsha,” kusho uMnu Zuma. Ekhuluma neLANGA, uMnu Ngobese uthe namanje akakalukholwa uthando olungaka aluthola kubantu angabazi nabavele bashintsha impilo yakhe. “Yebo ngiyalwazi udaba lomcimbi ohlelwayo futhi nakhona yinto ebengingayilindele. Ngijabule kakhulu ngawo. “Uqinisekisile ukuthi uyaqala emsebenzi namhlanje ngoMsombuluko, wathi nomndeni wakhe ujabule kakhulu ngalokhu okumehlele,” kusho yena.
Previous articleKusolwa ‘ukungalalelwa ekhaya’ ngokuzibulala kukasomabhizinisi
Next articleInyanga yodumo ecaleni lokwebiwa kuka-R103 million